र्‍याकरूपी पुस्तकालयमा अरू किताब पनि थपियोस् भनेर भन्दा उनलाई घत परेछ । सुरक्षाकर्मी कम साहित्यकार बढी भएर सोच्दा उनलाई ‘हो त नि !’ भन्ने भएछ । व्यवस्थित पुस्तकालय जुम्ला कारागारमा मात्र किन ? कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्ला पनि हुनुपर्छ भनेर खट्केछ । ‘कारागारलाई किताब’ अभियान यसैबाट शुरु भयो। हाललाई ठूलाठूला परिणामतिर नसोची कैदीबन्दीहरूमा किताबी संसारको कौतूहलले सके कन्याउने, नत्र एक दिन भए पनि कारागारलाई साहित्यमय बनाउने । बास् !
मन्तव्यबाट कार्यक्रम शुरु भयो। सीताराम रिजाल, प्रजिअ दुर्गा र नागरिक समाजका तोरण कठायतले मन्तव्य दिइरहँदा मेरो ध्यान कैदीहरूमा थियो । मन्तव्यले उनीहरूमा के कुरा खेलिरहेको होला भनेर मलाई खुल्दुली लाग्यो । उनीहरूको अनुहार पढ्न म एकेकलाई केलाउन थाले ।
यसरी ‘कारागारलाई किताब’ अभियान डेढ घण्टामा सकिनुपर्ने, तीन घण्टा लम्बियो । जेलबाट फर्कंदा मलाई लाग्यो म कुनै साहित्यिक भेलाबाट फर्किराखेको छु । सन्तुष्टि मिल्यो । चिन्ता एउटै हो । ‘कारागारलाई किताब’ अभियान नेपाल प्रहरीमा एउटा साहित्यकार फ्रहरी अधिकारी सक्रिय हुन्जेलसम्म मात्र हो ? वा सुधारगृह कार्यत्रमको अभिन्न पाटोको रूपमा स्थापित हुने हो ?
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ १०:०१